ယူနီကုဒ်သုံးခြင်းကြောင့် အစိုးရနဲ့ Facebook က မိမိကို ပိုပြီး နောက်ယောင်ခံ စောင့်ကြည့်နိုင်မလား ? အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ယူနီကုဒ်စနစ် ပြောင်းသုံးကြဖို့ အတင်းကာရော တိုက်တွန်းနေတာ ဘာကြောင့်လဲ ? ~ Myanmar Online News
ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ အစိုးရဘက်က ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးရေးအတွက် Lobbying Team ဖွဲ့၊ သံတမန်တွေ ခန့်တဲ့အပြင် Customer Right ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဇွတ်အတင်း ပြောင်းခိုင်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အာဏာအရှိဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က တစ်နှစ်တစ်ခါပဲလုပ်တဲ့ UN အထွေထွေညီလာခံမတက်ဘဲ Unicode ပြောင်းဖို့ ကြော်ငြာကို အပူတပြင်း ရိုက်ကူးဖြန့်ဝေနေရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကနေ Facebook သုံးစွဲသူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်နေသူတစ်ယောက်က မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးနေတာကြောင့် ထောက်လှမ်းရတာ၊ နောက်ယောင်ခံရတာ အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခေတ်မီ စက်ကိရိယာတွေက ဇော်ဂျီကို Support မလုပ်လို့ အကန့်အသက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေက Keyword Content Filter Engine ကို သုံးတာဖြစ်ပြီး သန်း ၆၀၀၀ ကျော် သုံးထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အစိုးရဘက်ကတင် မဟုတ်ပါဘူး Facebook ဘက်ကလည်း မြန်မာ Account တွေမှာ သုံးတဲ့ ဇော်ဂျီ Font ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ထောက်လှမ်းမှုတွေမှာ အခက်အခဲရှိတယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး Unicode သုံးလိုက်ခြင်းဖြင့် အစိုးရဘက်က ပြည်သူတွေကို ကောင်းကောင်းကြီး ထိန်းချုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်သလို Facebook ဘက်ကလည်း Myanmar User အားလုံးကို အလွယ်တကူ ခြေရာခံရှာဖွေမှုတွေ လုပ်နိုင်တော့မှာ အသေအချာပါပဲ။
တစ်လောကပဲ Facebook က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စုံစမ်းရှာဖွေမှုတွေအကြောင်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ဒီအချိန် အရှိန်အဟုန်နဲ့ Unicode ပြောင်းခိုင်းနေတာဟာ အစိုးရနဲ့ Facebook တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်ဝါးခြင်းရိုက်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အဓိကခြေလှမ်းကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါ။ ဒီအကြောင်းကို Facebook ရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်း ထည့်သွင်းပြောထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ၁၃ လ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီကာလအတွင်းမှာ အစိုးရဘက်ကနေ Unicode အသုံးပြုပြီး အစိုးရကို မထောက်ခံသူတွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေ ပါတော့မယ်။ Facebook ဆိုတာမျိုးက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေဘက်က ကမ်းလှမ်းစေခိုင်းတာတွေ ရှိရင် လုပ်ပေးရတဲ့ သူမျိုးဖြစ်တာကြောင့် Unicdoe သုံးပြီး အစိုးရကို ဝေဖန်သမျှ Account တွေ Lock နဲ့ Disable ဖြစ်တာ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ငါက အခုဘာလုပ်ရမှာလဲ လို့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ မေးစရာရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တာကတော့ Unicode ကို ပြောင်းသုံးရပါတယ်။ အခုချက်ချင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှ စသုံးပါ။ ဒါမှ သင့်အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ၂၀၂၀ အထိ သင့် Account ရှိဖို့ မသေချာပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက Zawgyi သုံးခြင်းကြောင့် သင့်အတွက် ဘာမှ ဆိုးဝါးတဲ့ Effect တွေ ရှိမလာပါဘူး။ ဇော်ဂျီ ဆက်သုံးနေရင် ပြဿနာရှိတယ်၊ အဆင့်နိမ့်သွားတယ်ဆိုတာတွေက ဝါဒဖြန့်မှာသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ နှစ်ကျော်ရပ်တည်လာခဲ့တဲ့ ဇော်ဂျီ Font က မြန်မာပြည်သူတွေကို ဘာမှ ဒုက္ခမပေးခဲ့ပါဘူး။ တီထွင်ခဲ့သူ ကိုရဲမြတ်သူက နှစ်ပေါင်းများစွာ အခမဲ့ ပေးသုံးခဲ့တာပါ။ အချို့နားမလည်သူတွေက Zawgyi ကို တရားခံလိုလို သုံးနှုံးနေကြပေမယ့် တကယ်တမ်းက ဇော်ဂျီက ကျေးဇူးရှင် တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာ Website နဲ့ Social Media တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ စာတွေရေး စာတွေ ဖတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်သူတွေကို WWW မှာ ပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပေးခဲ့တာ Zawgyi ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် မီဒီယာများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပြည်သူများအနေနဲ့ ဇော်ဂျီကို အစောတလျင် လက်တွဲဖြုတ်သင့်/ မဖြုတ်သင့် စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။